Inona no anarana mahazatra indrindra amin'ny soavaly | Soavaly Noti
Ny fifamatorana eo amin'ny biby sasany sy ny olona dia mahery tokoa. Angamba, ny toe-javatra toy izany dia mihamaivana bebe kokoa raha azo atao rehefa voalaza fa ny biby dia tsy iza fa ny soavaly. Ary ireo mpitaingin-tsoavaly ireo dia niaraka tamintsika hatramin'ny taloha, izay nanjary ampahany amin'ny fianakavianay. Be loatra, mba tsy hisalasala izahay hanome izay rehetra ilaina amin'ny fampiononana anao ary, mazava ho azy, manome anarana azy ireo izahay miaraka amin'ny firaiketam-po lehibe indrindra azo atao.
Ny priori, manonona ny soavalinay dia mety ho somary tsotra ihany, saingy tsy misy zavatra mety ho lavitra ny fahamarinana. Tokony hieritreritra isika fa io teny manavaka ny soavalintsika amin'ny ambiny io dia tsy maintsy manana lanja manokana. Ary noho izany, fanaovana Batisa, amin'ny lafiny iray, ny soavaly na ny soavalintsika dia mety ho tonga aretin'andoha tokoa ho an'ny olona maro.
Manaraka izany, hiezaka izahay hanamora ny asa an'io amin'ny alàlan'ny fanolorana hafa anaran-tsoavaly miankina amin'ny lahy sy ny vavy. Hilaza aminao izahay hoe iza no anarana malaza indrindra ary hiezaka izahay hanazava ny niandohan'ny sasany amin'ireo anarana ireo.
1 Torohevitra momba ny fisafidianana ny anaran'ny soavalinao
2 Ohatra amin'ny anarana hoe soavaly lahy
3 Ohatra amin'ny anarana ho an'ny soavaly vavy
4 Mety ho an'ny lahy sy ny vavy ny anarana
5 Araka ny filazan'ny ray aman-dreny
6 Safidy hafa
7 Fiandohan'ny anarana soavaly sasany
Torohevitra momba ny fisafidianana ny anaran'ny soavalinao
Raha vantany vao nanapa-kevitra ny hanome anarana ny sakaizanay izahay, dia tsy maintsy tadidintsika fa biby soavaly tena ny soavaly ary tsy mila asa be akory izy ireo hametrahana ny anarany. Mazava ho azy, mba hahatratrarana an'io fitomboana haingana io dia ho zava-dehibe ny famerimberenana. Izany dia noho izany Ny anarana voafidy dia tokony ho tsotra, mora tadidy na ho an'ny soavaly na ho an'ny lehilahy, tsy maintsy mirindra sy tononina mazava.
Raha mahafeno ny fepetra takiana rehetra voalaza etsy ambony ny anarana nofidinay dia afaka mirehareha amin'ny fisafidianantsika ny anarana marina isika.
Ohatra amin'ny anarana hoe soavaly lahy
Ny anarana mahazatra indrindra an'ny soavaly lahy dia ireto manaraka ireto: Galán, Sultan, Gourmet, Brave, Lightning, Pegasus, Silvestre, Fox, Zeus ary Spartacus.
Ohatra amin'ny anarana ho an'ny soavaly vavy
Raha ny an'ny marety, ny anarana be mpampiasa indrindra dia ireto: Gitana, Arizona, Dulcinea, Esmeralda, Triana, Cayetana ary Ágata.
Mety ho an'ny lahy sy ny vavy ny anarana
Na lahy na vavy ny soavalinay, Azontsika atao koa ny misafidy lehilahy mahasoa sy mandoka ny lahy sy ny vavy. Ireto misy sasany amin'izy ireo: Atila, Freckles, Noble, Sparks, sns.
Araka ny filazan'ny ray aman-dreny
Tsy fahita matetika ny fahitana fa rehefa tonga eo amin'izao tontolo izao ny zaza dia omena ny anarany avy amin'ny iray amin'ireo havany. Amin'ny ankapobeny, io anarana io dia matetika mifanitsy amin'ny anaran'ny ray aman-dreniny, na amin'ny fahazoana ny anaran'ny ray na ny reniny.
Indraindray, ity fomba ity dia mihatra amin'ny fanondroana soavaly. Betsaka ny tompona izay, rehefa mifanena amina foal vaovao, dia manapa-kevitra fa ny anaran'ilay foal dia hanaraka ny fifangaroan'ny anaran'ny ray aman-dreny.. Izany hoe, amin'ny fampiasana ny litera voalohany amin'ny anaran'ny ray sy ny farany an'ny reniny, na ny mifamadika amin'izany dia noforonina ny anaran'ilay biby tanora. Indraindray tsy tokony horaisina amin'ny sanda tarehy io raikipohy io satria mety hisy anarana isan-karazany mety hitranga, noho izany dia tapaka ny hevitra fa hilalao sy hanambatra ny taratasin'ny anaran'ny ray aman-dreny roa tonta mandra-pahatongan'ny vokatra tsara indrindra.
Ankoatra ny anarana rehetra naroso tao amin'ireo fizarana teo aloha dia olona maro no misafidy misafidiana anarana mifanaraka amin'ny toetran'ny soavaly na ny soavalinao. Ohatra, ny loko palitao biby mazàna izy io dia singa iray lehibe amin'ny famolavolana anarana. Noho izany dia mahita soavaly antsoina hoe: Colorado, Cenizo, sns isika. Koa, ny toetran'ny biby Manampy betsaka amin'ny fanapahan-kevitra farany izany, ary avy eo ny anarana toy ny: Fury, Wild, Bravo ...
Fiandohan'ny anarana soavaly sasany
Fantatry ny rehetra fa ny soavaly dia tandindona ary iray amin'ireo famantarana lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Io fifandraisan-davitra io dia tsy voamariky, ary na dia amin'izao fotoana izao aza dia mbola misy ny dian'izy io, hita amin'ny anarana.
Soavaly maro no voatonona anarana amin'ny razamben'izy ireo hafa izay tena mpiandany tamin'ny hetsika tantara. Noho io antony io dia misy soavaly ankehitriny izay mety misy ny anarany: Palomo (iray amin'ny soavalin'i Simón Bolivar), Sultan (soavaly Tiorka an'i Giovanni de Medici), Brillante (soavalin'i Carlos XI avy any Suède) na Moscas (soavaly Jean Babou, Count of Sagonne)
Ho fanampin'izay, tsy misy intsony ireo mpitia soavaly sasany izay misafidy ny hametraka ny anaran'ny soavaly malaza ho an'ny azy manokana, fa nomena anarana araka ny olombelona izy ireo izay manana ny lasa be voninahitra koa toy ny: Napoleon, Kaisara, Emperora sns.
Araka ny efa hita, tsy mitonona anarana soavaly fa tsinontsinona, nefa tsotra, tsotra. Saingy, amin'ity lahatsoratra ity dia manantena izahay fa nanampy betsaka tamin'ny fanolorana safidy sy safidy hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Anaran-tsoavaly